Luis Suarez oo seegidoona Kulanka uu ka hortagayo Kooxdiisa hore ee Barcelona
Home Horyaalka Spain Luis Suarez oo seegidoona Kulanka uu ka hortagayo Kooxdiisa hore ee Barcelona
33 jirkaan ayaa laga helay Coronavirus ka hor kulanka ay kooxdiisu wajaheyso kooxdiisii ​​hore ee Barcelona Sabtida.
Luis Suarez ayaa laga helay cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’, sida ay xaqiijiyeen xiriirka kubada cagta ee Uruguay (AUF).
Weeraryahanka Atletico Madrid ayaa la sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana uu u hoggaansamayo tilmaamaha is-karantiimeynta.
Suarez ayaa seegi doona kulanka isreebreebka Koobka Adduunka ee Uruguay ee ay la leeyihiin Brazil Talaadada, iyo sidoo kale kulanka Atletico ee sabtida ay la ciyaari doonto kooxdiisii ​​hore ee Barcelona .
Warbixin ay soo saartay AUF ayaa lagu yiri: “Xiriirka Kubada Cagta Uruguay waxay soo wariyeen in baaritaano lagu sameeyay dhamaan xubnaha kooxda waa weyn, taasoo keentay in ciyaartoyda Luis Suarez, Rodrigo Munoz iyo sarkaalka rasmiga ah ee Matias Faral laga helay Covid-19.
Saddexda xubnood ee aan soo sheegnay waxay ku sugan yihiin caafimaad wanaagsan.
Suarez ayaa ku soo bilaabay isaga iyo weeraryahanka Man United Edinson Cavani kulankii ugu dambeeyay ee Uruguay isaga oo dhaliyay gool kulankii ay 3/0 uga badiyeen xulka Colombia jimcihii.
33 jirkaan ayaa qaab ciyaareed aad u fiican ku soo qaatay Atletico, waxaana shaki la’aan uu ka niyad jabi doono hadii uusan fursad u helin inuu ka horyimaado kooxdiisii ​​hore dhamaadka usbuuca.
Previous articleNapoli oo dooneysa Xidiga Emerson Palmieri ee Chelsea ka tirsan?
Next articleXidiga Sergio Ramos oo ka hadlay wararka sheegaya in oo ka fariisan doono xulkiisa Spain